HomeWararka Ciyaaraha MaantaZinedine Zidane oo ka Hadlay guusha Barcelona laga gaaray iyo Cadaadiska Saaran Kooxda
April 11, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Spain 0
Macalinka Kooxda Real Madrid ayaa ka hadlay guusha ay ka gaareen Kooxda Barcelona kulankii Xalay ka dhacay Garoonkooda.
Zinedine Zidane ayaa sheegay in Kooxda ay sameesay Xadkii loogu tala galay Xili Ciyaareedkan qeybtiisa Danbe gaar ahaan Kulamadii ugu danbeeyay isagoo ka jawaabay Cadaadiska saaran Kooxda.
Guushii ay ka gaareen kooxda ay xafiiltamaan ee Barcelona ayaa ka dhigtay in Real Madrid ay hogaanka u heyso La Liga, iyadoo ay isku dhibco yihiin kooxda kaalinta labaad ee Atletico Madrid, oo kulan baaqi u yahay.
Waxba kama bedelayso, weli waxaa jira waddo dheer oo harsan. Waa inaan nasanaa maanta kadib, labo kulan oo dhib badan,” ayuu Zidane ku yiri shirkii ciyaarta ka dib.
“Haatan waa inaan nasanaa, ma garanayo sida aan ku dhameysan doonno xilli ciyaareedka, Koox ahaan, waxaan ku jirnaa xadkayaga”.
Ugu danbeyn ayuu sheegay in uu ku Faraxsan yahay guusha ay ka gaareen Kooxda Barcelona isla markana guud ahaan guuleesteen.
Real Madrid ayaa haatan u safri doonta England si ay ula ciyaarto Liverpool lugta labaad ee wareega 8 dhamaadka UEFA Champions League Arbacada.